Jasmine Purified Drinking Water | Industrial Tour
+959 776 666 112
Industrial Visit Invitation
We would like to warmly invite students, educators, Institutes and NGOs to come and visit our Jasmine Water factory to share our knowledge and experience in producing Jasmine purified water.
In the industrial visit, we will explain the processes of producing purified water and the standard operation procedure (SOP) that we have to go through in each process. We will share the technology and water treatment method that we are using to produce Jasmine purified water.
Our purpose is to share the industrial knowledge to students or organization and to inspire the industrial standards.
Kindly feel free to contact us, if you would like to visit to our factory.
ကျွန်တော်တို့ Jasmine ရေသန့်မှ ရေသန့်ထုတ်လုပ်မှု အသိပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများကိုသိလိုသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGOs အဖွဲ့အစည်းများ ကို Jasmine ရေသန့်စက်ရုံသို့ လာရောက်လေ့လာရန် နွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Jasmine ရေသန့်စက်ရုံသို့ လာရောက်လေ့လာသူများကို Jasmine ရေသန့်ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် အဆင့်တစ်ခုခြင်းစီတွင် လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းပြပါမည်။ Jasmine ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော နည်းပညာများနှင့် စက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုပုံကိုလည်း သရုပ်ပြ ရှင်းပြသွားပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ Jasmine ရေသန့်စက်ရုံကို လာရောက်လေ့လာခြင်းဖြင့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းခွင်ဗဟုသုတများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နည်းစနစ်ကောင်းများ လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ Jasmine ရေသန့်သို့ လာရောက်လေ့လာမည်ဆိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်၍ ကြိုတင်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
Contact person : Ma Phyu
Phone : +959795 515 661
Email : pyone@jasminepurewater.com
No.526, Myoe Shaung Road, Hmawbi Township,Yangon, Myanmar
No.526, Myoe Shaung Road, Hmawbi Township,Yangon, Myanmar.
+95 (9)450 032 162, +95 (9)795 515 661 info@jasminepurewater.com
© Copyright 2018 by Jasmine Purified Drinking Water Developed by Mingalar Info Tech